Category Layaabka – fogaanarag
Waaxda gaadiidka Sweden ayaa ogolaatay in busus darawal la,aan ay ka howlgalaan Magaalada Stockholm waana markii ugu horeeyay taariikhda dalka Sweden iyo Scandinavian ay ka shaqeeyaan bususka noocaan ah. Bususkaan ayaa isaga gudbaya inta u dhexeysa Kista mall iyo Victoria tower oo ah waqooyiga Stockholm, waana 1.5 kilo mitir markiiba iyagoo ku soconaya More...
By Jama On Wednesday, July 26th, 2017
Ra’iisulwasaare Kheyre oo ka qeyb galay kullanka madaxda iyo shaqaalaha dowladda
Muqdisho, July 26, 2017….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qeyb galay munaasabad loogu magac daray kulanka madaxda sare iyo shaqaalaha dawladda More...
Soomaaliya waxaa hadda ka jira dhibaatooyin fara badan oo ay ugu daran tahay abaarta, si aan ugu kuur galo saamaynta ay abaartu ku yeelatay dadka iyo duunyada ku nool Bariga Gobolka Mudug ayaa Gaalkacyo More...
By Jama On Tuesday, March 7th, 2017
Faransiiska oo soo bandhigay baabuur shaqeynayo bilaa shidaal iyo korontaba + video
By Jama On Monday, February 20th, 2017
Taleefoonkii uu isticamaali jiray hogaamiyaha Nazi-ga ee Germany dagaalkii 2aad ee aduunyada ayaa iminka lagu xaraashay lacag gaaraysa £161,000. Taleefoonkani ayaa waxaa dhufeyskii uu ku dhuumanayey Hitler ka More...
Netherlands oo ka walaacsan halista kaga imaan karta caruurta dagaalyahanada Daacis
Dowlada Holland ayaa ka walaacsan halista kaga imaan karta caruurta ay dhaleen dagaalyahanada Daacish ee haysta dhalashadooda. Isku-duwaha waaxda ka hortaga argagixisada ee dalka Netherlands ayaa sheegay inuu ka More...
By Jama On Saturday, April 30th, 2016
Koox Cunsiriyiin ah oo aaminsan afkaartii Naasiyiintii Germalka ayaa ogolaansho u helay in banaanbax ay ku qabsadaan Magaalada Borlänge, gobolka Darlarna ee Dalka Sweden. Banaanbaxaan oo ah mid ay ku muujinayaan More...
By Jama On Wednesday, April 22nd, 2015
Lamaane £9,000 oo Ganaax ah ku Muteystay Qaylada Ka Baxaysa Marka ay isu Tagayaan
Lamaane Talyaani ah ayaa lagu ganaaxay in ay bixiyaan £9,000 oo ganni kadib markii lagu helay dacwad ay ka gudbiyeen dariskooda oo ah qaylo iyo guryan saa,id ah oo ay sameeyaan marka ay isu tagayaan ama isu galmoonayaan. Dariska More...
By Ali Dahir On Thursday, April 9th, 2015
Netherlands: Tobankii Arday Midkood ayaa Isticmaala Daawa kordhisa Feejignaanta Maxkaxda
Mid ka mid ah Tobankii Arday ee Hollandees ah ayaa isticmaala daawo ka caawisa feejignaanta maskaxda oo ay si habsami leh diiradda ugu saaraan waxbarashada iyo dhamaan ficilada kale ee la xiriira nolol maalmeedkooda. Sida More...
By Ali Dahir On Thursday, January 1st, 2015
Netherlands: Nin Saddax Sanno Ku Dhex Mowtanaa Gurigiisa oo aanan laga warqabin
Meydka nin 52 jir ah ayaa laga dhex helay gurigiisa kaas oo la aaminsan yahay in saddex sano ka hor uu si caadi ah ugu dhex dhintay gurigiisa oo ku yaalla gobolka waqooyiga Netherlands ee Groningen Booliiska iyo More...